Foara Voatra andiany fahenina - Hanasongadina ny Vita Malagasy
Publié octobre 19, 2019 par Book News
Tsy hisy afa-tsy vokatra Vita Malagasy mandritra ny foara Voatra andiany Faha 6, izay hotontosaina ao amin’ny zaridainan’Anosy.
Omena laka ny Vita malagasy
Hotanterahina ny 24 hatramin’ny 26 Oktobra 2019 eny amin’ny zaridainan’Anosy ny foara Voatraandiany fahenina. Orinasa madinika sy salantsalany manodidina ny 50 no handray anjara amin’izany.
Tanjona ny hampahafantarina ny fisian’ny orinasa malagasy mamokatra zavatra tsara. Hampahafantarina­ ihany koa ny vahoaka fa tsy voatery hajifa ny any ivelany fa efa misy eto Madagasikara.
Vokatra vita gasy efa voahodina avokoa no haseho mandritra io fotoana io. Sehatra maro toa ny asa tanana, sakafo, fambolena, famokarana « huille essentiel » no hita ao. Anisan’ny voizina mandritra io fotoana io ny fanjifana ny vita malagasy.
Mampiavaka ny vokatra hampirantiana ao koa ny tsy fisian’ny simika fa tena natoraly sy ara-pahasalamana.
Ankoatra izay dia hisy koa fampiofanana momban’ny « fenitra » izay hiarahana miasa amin’ny BNM (Bureau des normes de Madagascar) sy ny Ministera mpiahy. Tanjona ny mamokatra ahafahan’ny mpandraharaha Malagasy manome vokatra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ara-pahasalamana mba afaka ahafahany miatrika ny tsena eto an-toerana sy ny tsena iraisam-pirenena.
Nisy ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, omaly, niresahana momba ny Foara Voatra, tao amin’ny CCIA Antaninarenina. cc: Toria Dimbiniaina
Tombontsoa azon’ny mpandraharaha Malagasy
Sehatra iray ahafahana mitady tsena ny Voatra. Fotoana ahafahana mitady toana na avy amin’ny Fanjakana na ny mpanjifa ihany koa. Raha tsiahivina dia efa maro ireo mpandraharaha Malagasy nahita vokatsoa nandritra ireo andiany teo aloha toy ny fahazoana mpiaramiombonantoka mpanjifa vaovao.
Anisann’y mitaiza ny mpandraharaha handray anjara amin’ny zavatra hafa sy hampafantatra ny vokany ihany koa ny fisian’ny fampirantihana Voatra.